Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » India emeghela ugbu a maka ndị njem si mba ofesi gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọ bụ oge mbụ India kwere ka ndị njem si mba ọzọ bata obodo ahụ kemgbe Machị 2020 mgbe ọ machibidoro mkpọchi coronavirus mba mbụ.
Ndị ọbịa si mba ofesi gbara ọgwụ mgbochi ọfụma na -eme njem ụgbọ elu a kwụrụ ụgwọ kwere ka ịbanye India malite taa.
Ndị njem mba ofesi na ụgbọ elu oge niile ga -enwe ike ịbanye India malite na Nọvemba 15.
Amabeghị ma ndị njem ga -abịarute ga -anọrọ iche mana ha ga -agba ọgwụ mgbochi ọ bụla ma nwalee nje ahụ n'ime awa 72 nke ụgbọ elu ha.
A na -ekwe ka ndị ọbịa si mba ọzọ bata India ọzọ, na nke mbụ kemgbe Machị 2020, mgbe obodo machibidoro mkpọchi COVID-19 nke mbụ na mba.
N'ime ezumike ọhụrụ nke mgbochi COVID-19, Ndị ọrụ gọọmentị India mara ọkwa na Fraịde na mba ahụ emepegharịala maka ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị ọbịa mba ofesi na -eme njem n'ụgbọ elu a kwụrụ ụgwọ.
Ndị njem si mba ofesi na njem ụgbọ elu oge niile ga -enwe ike ịbanye India malite na Nọvemba 15, ndị isi kwukwara.
Achọpụtabeghị ma ndị njem ga -abịarute ga -anọrọ iche India, mana ha ga-agba ọgwụ mgbochi ọ bụla ma nwalee ihe ọjọọ maka nje COVID-19 n'ime awa 72 nke ụgbọ elu ha.
Mkpebi imepe obodo a, nke ministri ime ụlọ nke India kwupụtara na mbido ọnwa a, na -abịa dịka ọrịa ndị India na -ebute kwa ụbọchị agbadala n'okpuru 20,000 site na ọnụ ọgụgụ kacha elu nke 400,000 na Mee wee gbakwunye ọtụtụ ndị mmadụ ọgwụ mgbochi.
India enyela ihe karịrị nde ọgwụ ọgwụ 970. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 70 nke ndị okenye tozuru etozu nwere opekata mpe otu ọgwụ.
Mbelata mmachi na ndị njem si mba ọzọ na -eleta mba ahụ, dabara na njem nlegharị anya nke India na oge ezumike. Ugbua, ọ kpalitela nchegbu ndị ọrụ ahụike dọrọ aka na ntị megide afọ ojuju.
Na mbido ọnwa a, Kansụl India nke Nchọpụta Ahụike, ụlọ ọrụ ahụike kachasị na India, dọrọ aka ná ntị na “njem ịbọ ọbọ” nwere ike ibute ọrịa COVID-19 ma ọ bụrụ na ndị njem anaghị agbaso ụkpụrụ nchekwa.
Dabere na data gọọmentị, ihe na -erughị nde ndị njem si mba ọzọ gara India na 2020, nke bụ ntinye karịa pasent 75 ma e jiri ya tụnyere 2019.